China na-ekesa ụlọ ọrụ DC Fan na ndị nrụpụta | Na-eri nri
Ike (Max) 22W
Agba Nwa, White, Green
Akụkụ 330 * 320 * 516/930 （mm）
Mbukota Akụkụ 365 X 319 X 400 (mm)
Nha ịbụ 4.3KG
Oscillating 90 Celsius
Nhọrọ Ọsọ Ọsọ 9 na ọnọdụ 5
Ogwe njikwa Njikwa aka
1. Otutu gbapụrụ ọsọ na ntọala
The ifufe ifufe nke nwere ọgụgụ isi mgbasa ofufe nwere ihe magburu onwe ahụmahụ na-adịghị na-eche isi ọwụwa mgbe ịfụ ruo ogologo oge, na ọ na-e ọzọ nlezianya na humanized n'okpuru ikuku ọkọnọ chọrọ nke dị iche iche ndapụta, na o nwere ise ụdịdị na-ezute kwa ụbọchị Akpanyere ụdị ọsọ ọsọ 5: Nkịtị, eke, ihi ụra, nne na nwa ebu n'afọ, ọnọdụ ECO gbanwere ka mmasị ọ chọrọ maka ezigbo nkasi obi.
2. Ngwunye ikuku ikuku na mbara igwe, na-akwalite ngbasa ụlọ n'ime oge anọ
6 mita nke ikuku dị ogologo na-eme ka mgbasa ozi gbasaa, mgbe ejiri ọnọdụ ikuku mee ihe, ọ nwekwara ike melite arụmọrụ nke obi jụrụ na ikpo ọkụ.
3. Otutu oscillation na-enyefe ume ume
Okwesiri ikwuputa na enwere uzo di iche-iche nke nkpuchi isi nke Sapphire na-ekesa onye ofufe, nke bu 10 Celsius, 40 Celsius, 100 Celsi elu na ala, 30 Celsius, 60 Celsius, na 90 Celsius aka ekpe na aka nri. Enwere ike iji ya na ala na aka ekpe na aka nri, enwere ike gbanwee ya n'otu ụzọ. Enwere ike idozi ya ka egbo mkpa onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ ọtụtụ mmadụ jụrụ.
4. Advanced moto DC dị jụụ, mkpọtụ mkpọtụ naanị 11dBA
70% dị ala karịa onye ofufe dị, jụụ na nkasi obi, na-enye gị ezigbo ụra abalị niile.
5. Ugboro abụọ-oyi akwa 15 ofufe UM UBARA imewe
Ọ na-e site 9 elu pupụtara na 6 n'ime pupụtara, abụọ-oyi akwa 15 ofufe pupụtara, ikuku olu site nnukwu ofufe agụba bụ banyere 1,8 ugboro karịa n'ime gburugburu obere ofufe agụba, na curvature nke ofufe agụba e kachasị na edozi, nke na-adaba adaba na ikuku ifufe abụọ dị iche iche. Ikuku na-agwakọta ọnụ; dị iche na ọdịnala ọdịnala na ikuku ndị ọzọ na-ekesa ikuku, anwụnta na-asọ oyi nwere ọgụgụ isi nwere ogologo ikuku ikuku, mpaghara sara mbara ikuku, yana ikuku dị nro. Dị ka osimiri dị omimi, ifufe na-efegharị, nke kwesịrị ekwesị maka ndị agadi, ndị nwere mmetụta dị nro.
6. Kemwepu maka okpokoro eji.
Enwere ike iji ya maka okpokoro na ala. A nwalere elu nke ụdị abụọ ahụ ọtụtụ oge ma gbanwee ya ka ọ bụrụ ogo kacha mma nke dabara adaba maka ojiji ndị mmadụ na-eme kwa ụbọchị. 93cm maka fans ala na 51.6cm maka tebụl okpokoro. Ma ọ nọ ọdụ na sofa, ịgụ akwụkwọ, iso nwa a na-egwuri egwu na kapeeti, ma ọ bụ dina n’elu akwa, enwere ụzọ ka mma maka gị.
7. Anwụnta na-asọ mmiri
Anwụnta na-egbu mmanụ dị mkpa dị mkpa abanye na ike ikuku na-agbasa ma na-agbasawanye, ebe anwụnta na-egbu egbu ka ukwuu. Site na isi ikuku na-agagharị agagharị, enwere ike ibuga ya n'akụkụ niile nke ụlọ, ka ezinụlọ niile wee nwee ike ịnụ ụtọ oge oyi na-enweghị oyi na anwụnta.
8. New smart HD ihuenyo mmetụ
Isi na-eji PC HD auto-gbanyụọ ihuenyo mmetụ, nke dị iche na bọtịnụ ọdịnala. Ọ dị mfe na oge a. Ìhè ahụ dị nro ma ọ bụghị na-egbuke egbuke. Ihuenyo ga-agbanyụ na-akpaghị aka n'ime 10 sekọnd na-enweghị ọrụ.
Nke gara aga: Tower Air Multiplier Agụba Fan
Osote: Bladeless ụlọ elu ọcha ofufe
Ikuku ikuku DC Fan
Bldc Pedestal ofufe
DC Motor Guzosie Fan
DC Pedestal Guzosie Fan